Stranger Things မှသရုပ်ဆောင်ထားသော Millie Bobby Brown နှင့် Noah Schnapp တို့သည် TikTok ဗီဒီယိုအသစ်တွင်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့သည် - သူစိမ်းများ
Stranger Things မှသရုပ်ဆောင်ထားသော Millie Bobby Brown နှင့် Noah Schnapp တို့သည် TikTok ဗီဒီယိုအသစ်တွင်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့သည်
Netflix ၏ Stranger Things Image ကိုယဉ်ကျေးစွာဖော်ထုတ်သည်။
Netflix မှာဘယ် Batman ရုပ်ရှင်တွေရှိပါသလဲ။ သားရဲ၏ဖြန့်ချိမည့်ရက်၊ သွန်းခြင်း၊ အနှစ်ချုပ်၊ နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အခြားအရာများ
Millie Bobby Brown နှင့် Noah Schnapp Stranger Things ရာသီ4ကိုရိုက်ကူးနေပါသလား။
ပရိသတ်တွေမေးနေကြတဲ့မေးခွန်းကြီးကတော့ Brown နဲ့ Schnapp တို့အတွက်မြင်ကွင်းအသစ်တွေပြန်ဆုံဖို့လား သူစိမ်းများ ရာသီ 4. ထိုအခါ, ကံမကောင်း, ငါတို့တကယ်မသိရပါဘူး။
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများစွာရှိသည် သူစိမ်းများ အွန်လိုင်းရာသီ 4, ထိုအရာ, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်စစ်မှန်တဲ့မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဲဒီမှာကွဲလွဲသတင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးထွက်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ရဲ့အဘယ်အရာကိုဖွင့်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ထင်ကြေးနားလည်ရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။
ငါတို့သိတယ် သူစိမ်းများ ရာသီ4သည် ရိုက်ကူးနေပါတယ် အခုဂျော်ဂျီယာမှာ။ ဒါဟာရာသီ4သွန်း၏အခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူရာသီသစ်ကိုရိုက်ကူးရန်ဘရောင်းနှင့် Schnapp အတူတူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစုစုပေါင်းအဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မယ်။
ကောလာဟလတွေလည်းရှိတယ် သူစိမ်းများ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ရိုက်ကူးရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ ထိုကောလာဟလများမည်မျှမှန်ကန်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ သို့သော် Netflix သည်ထုတ်လုပ်မှုအချက်အချာအသစ်တစ်ခုရှိသည့်ပြည်နယ်တွင်ရာသီသစ်ကိုရိုက်ကူးလိမ့်မည်ဟုအစီရင်ခံထားသည်။
ပရိသတ်များစွာကနယူးမက္ကစီကိုတွင်ရိုက်ကူးထားသောမြင်ကွင်းများသည်ရာသီကုန် ၃ ရာသီတွင်ဟော့ကင်းမှထွက်ခွာသွားပြီးနောက် Byers ပြောင်းရွှေ့သွားသည့်နေရာနှင့်ဆက်စပ်နေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ထုတ်လုပ်မှု ၄ ခုသည်ဂျော်ဂျီယာမှထွက်ခွာရမည်။
သူစိမ်းများ ရာသီ4ကို Netflix တွင်ဖြန့်ချိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း , ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဖြစ်ပျက်သို့မဟုတ်မသွားမယ့်လျှင်မေးခွန်းထုတ်ရန်စတင်ပါတယ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးနွေရာသီမတိုင်မီထုတ်လုပ်မှုထုပ်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျနော်တို့ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ် သူစိမ်းများ ရာသီ4Netflix ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း။
အကယ်၍ ထုတ်လုပ်မှုသည်နွေရာသီအထိတိုးချဲ့လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့မြင်သည်အထိ ၂၀၂၂ အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည် သူစိမ်းများ Netflix အပေါ်ရာသီ4။
အကြောင်းပိုမိုသတင်းများအတွက်ညှိနေပါ သူစိမ်းများ ရာသီ 4!
လူသတ်တဲ့ရာသီ4netflix နဲ့ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ
ရာသီဘယ်နှစ်ယောက် flash ကို
အပေါ်တဦးတည်းဦးတည်ချက် icarly အဘယ်သို့ဇာတ်လမ်းတွဲခဲ့သည်